सेरोफेरो : मनसुनमा मनाङ
काठमाडौँ — कसोकसो कछुवाकै गति भए पनि झन्डै ९ घन्टाको यात्रापछि चामे पुगियो । मनसुनमा मन्द निदाएको गाउँ । सिमसिम पानी । कालो दाल, काउली र आलुको तरकारी । एक थाल भात सर्लक्कै सकियो । मनमा बुंङ, ताल गाउँ, च्याम्चे, तिमाङका झरनाको सम्झना बोकेर मस्त निदाइयो पनि । पहिला अत्यासलाग्दो थकाइ, पछि गहिरो निद्रा । सायद यात्राको मिठास नै यही होला ।
मनाङ घुम्न कहिले जाने ? धेरैको उत्तर दसैंतिहारताका हुन्छ । त्यति बेला तिलिचो चुम्ने र थोराङ्ला हुँदै अन्नपूर्ण सर्किट घुम्ने पर्यटकको लर्कोले काठमाडौं असनको झल्को दिन्छ । यसपालि मेरो यात्रा भने बेमौसमी रहयो, साउनको झरीमा । पदमार्गमा पर्ने पिसाङ, भ्राका र मनाङ गाउँमा सिंचाइसम्बन्धी अनुसन्धानमा सघाउनु मुख्य काम थियो । साथमा थिए एरिजोना विश्वविद्यलय अमेरिकामा विद्यावारिधि गर्दै गरेका गाउँले दाइ जगदीश पराजुली । उनी व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीका बारेमा अनुसन्धान गर्दै थिए । नयाँ ठाउँ घुम्ने, नयाँ मान्छे भेट्ने र कथा लेख्ने हुटहुटी मनमा कुद्दै थियो । यही हुटहुटीसँगै सुरु भयो मनाङ यात्रा । समय दुई साता, गत साउनको दोस्रो साता ।
हामीले टेक्दा बेसीसहर शान्त थियो । त्यहाँबाट चामेका लागि बिहान ११ बजे छुटेको जिपका ड्राइभर थिए, चितवनका कृष्ण गुरुङ । ठूला पहाड खोपेर बनाइएको ६५ किमिको कच्ची सडक । गर्जेको मस्र्याङ्दी छेउछाउको यात्रा । बीचमा तर्नुपर्ने केही थान काठेपुल । अनि पुलैबिना तर्नुपर्ने म्यार्दी र तिमाङ खोला । पहिरोको उच्च जोखिम रहेको सडकमा ६ घन्टाभन्दा बढीको यात्रा । लमजुङ र मनांङका पहाडभन्दा त्यसलाई सहज पार गर्नुपर्ने चुनौतीको पहाड ठूलो लाग्यो मलाई ।
‘बर्खाको बेला कहाँ के हुन्छ भन्न सकिन्न,’ चालक गुरुङले भने । त्यसैले समूहमै यात्रा गर्नका लागि हाम्रापछि दुई र अघि दुई जिप कुद्दै थिए । चालकसहित ७ जना चढेको जिप, केही थान औषधि । केही सिमेन्टका बोरा । बिजुलीको सामान, रासनपानीसमेत गरी झन्डै आठ क्विन्टलभन्दा बढी सामानले भरिभराउ थियो । यसरी धेरै सामान र केही यात्रु बोकेर कुद्ने जिपहरू ६० भन्दा बढी रहेको सोही रुटका अर्का जिप चालक सुदीप तामाङले बताए । सडक आएपछि, प्रतिकेजी लगभग २० देखि २५ रुपैयाँ कम ढुवानी खर्चमा पिसाङ, भ्राका, मनाङका गाउँलेले बेसीसहरबाट रासन भित्र्याउन पाएका रहेछन् । यससँगै सरर सडक हुँदै मनाङ पुग्ने पर्यटक पनि बढेका छन् । यसले पैदलमार्गको व्यापारलाई हिउँले छाडेको हिमालजस्तो बनाइदिने डर पनि बढ्दै गएको छ । अझ गाडीको यात्रामा धेरै उचाइ केही क्षणमै कट्ने भएकाले उचित जानकारीको अभावमा पर्यटकहरू लेकको सिकार पनि भएका छन् । सडकले थपेको चुनौती त छँदै छ, यसले पुर्‍याएको सहजताको पनि लामै लिस्ट छ । अझ मनसुनमा यात्राको मज्जै बेग्लै ।
झरीको मौसम, पानीको उर्लदो रवाफ । पूरै पहाडलाई मोतीको मालाले बेरेको झैं लाग्ने च्याम्चेको झरना यात्राको मुख्य आकर्षण थियो । त्यहाँबाट केहीअघि लागेपछि लम्जुङ र मनाङको सिमानामा पर्ने म्यार्दी नदी तर्न भने हामी चढेको जिपलाई निकै सकस भयो । खोलाको बीचमा पुग्दा नै जिपभित्रै पानी पस्न थाल्यो । हाम्रा खुट्टा मात्र नभई सामान पनि भिजे । बल्लतल्ल खोला तरिसकेको के थियो, जिपका पांग्रा हिलोको दलदलमा गढ्न थाले । पछाडिका जिपमा रहेका साथीहरू पनि ओर्लेर जिप धकेल्न खोजे तर सकेनन् । धन्न बन्दै गरेको म्यार्दी पुल छेउमै डोजर थियो । फलामको लठ्ठाले जिपको पट्टा बाँधेर डोजरले तानेपछि मात्र दलदलबाट बाहिर निस्कियो । एउटा समस्याबाट पार नपाउँदै अर्को समस्या जेलिन आइपुग्यो, जिपको पट्टाको केही भाग भाँचियो । त्यही बेला पानी पनि पर्न सुरु भयो । थोरै तनाव, थोरै थकान, थोरै कौतूहल नभए यात्राको के मज्जा ?
तेस्रो दिन । हामी समुद्र सतहबाट लगभग ३३ सय मिटरको उचाइमा रहेको उपल्लो पिसाङ आइपुगेका थियौं । ७४ वर्षे याङ्दु गुरुङ आफ्नो ९७ वर्षे बालाई भेट्न बहिनीको घर जाँदै रहेछन् । यस्तो मौका दुर्लभ नै पाइन्छ । त्यसैमाथि एक दिनअघि मात्र तिब्बत घुमेर फर्केका थिए उनी । तिब्बतको कोसेली छुर्पी, मिठाई र खादा लिएर बा भेट्न हिँडेका उनकै पछि लागेँ म । केही बेरको हिंडाइमा बहिनीको घर पुगेपछि उनले बाबा डोली गुरुङलाई बोलाए । माने जप्दै आएका डोली ९७ त के ७९ वर्षका भन्न पनि नसुहाउने देखिन्थे । हात गोडा अझै तगडा । कान टक्लक्क सुन्ने । केही दाँत अझै बाँकी थिए । म महिना दिनपछिको बाउ–छोराको मिलन हेर्न लालायित भएँ । उमेरले मुहारमा जति धर्सो ताने पनि । बाबाआमाको अगाडि परेपछि जति बूढाबूढी पनि बच्चै देखिँदा रहेछन् । याङ्दुले बाबाको अघि शिर निहुराए आशीर्वाद थापे । बाबालाई तिब्बती गुम्बाबाट ल्याइदिएको खादा लगाइदिए । अनि कोसेली थमाए । डोलीले छोरालाई सुम्सुम्याएको माया मेरै आँखासम्म आइपुग्यो । युवा अवस्थामा गाउँ घुम्न आएका घलेहरूसँग याङ्दु र उन अन्य गुरुङका साथीहरूले मीत लगाएका रहेछन् । त्यसैले अहिले बुढयौलीमा मनाङ जिल्लाका धेरैले याङ्दुलाई पिसाङका मीतबाको नामले चिन्छन् । गाउँमा सामुदायिक भवन, झोलुं्गेपुल बनाउन अनि सडक ल्याउन सक्रिए भूमिका निर्वाह गरेका मीतबाको मनमा विकासको रहर अझै मेटिएको भने छैन । उनले गाउँभरि स्याउ फलाएर सहर पठाउने रहरको पोको फुकाइहाले । मीतबाले यसो भनिरहँदा उनका बाबा डोली टाउको हल्लाउँदै मज्जाले छुर्पी चुसिरहेका थिए ।
चामेमाथि लागेपछि । मनाङका केही गाउँमा अचम्मको चलन छ । जिल्ला बाहिरका मानिससँग जग्गाको कारोबारै हुँदैन । जिल्ला बाहिरकाले यहाँका चेली बिहे गर्न भने पाउँछन् । बिहेपछि यहीँ बसेर व्यवसाय तथा घरजम गर्न भने समुदायलाई केही रकम जरिवानास्वरूप तिर्न पर्छ । ‘गाउँठाउँअनुसार रकम फरक छ’, पिसाङका मीतबाले भने, ‘पछिल्लो पटक तीन लाखसम्म तिरेका छन् ।’ यसरी यहीँका चेली बिहे गरेर यतै व्यापार गरेर बस्नेहरू ओखलढुंगा, काभ्रे, गोरखा, धादिङदेखि पोखराकासम्मका मान्छेहरू छन् । उनीहरूलाई यहाँको भाषामा ‘मा’ अर्थात् ज्वाइँ भनिन्छ । पिसाङ गाउँमा मात्र मनाङे ज्वाइँ ८ भन्दा बढी भएको होटल मनाङ मस्र्याङ्दीका याम घलेले बताए । गोरखाका उनी आफंै पनि मनांङे ज्वाइँ हुन् । बन तथा बन्यजन्तु संरक्षण गर्ने अभियानमा सक्रिय उनी उपल्लो पिसाङमा होटल व्यवसाय गरेर बस्छन् । टयांकी मनाङमा पनि ५ जना यतै घरजम गरेर बसेका व्यक्ति रहेको स्थानीय कान्छा लामाले बताए ।
हामीले छाड्ने दिनदेखि नै पिसाङमा पिकनिङ सुरु भएको थियो, चार दिनका लागि । स्थानीय भाषामा यसलाई किकी अर्थात् ‘मीठो कुरा’ भनिँदो रहेछ । वर्षको एक पटक । प्राय: साउन महिनामा । गाउँअनुसार एकदेखि सात दिनसम्म चल्दो रहेछ किकी । पिसाङको किकीमा कालो याक ढालिएको थियो । कोही पकाउन व्यस्त, कोही नाच्न त कोही तास खेल्न । बाघ, पारा, कौडाका जुवा खाल पनि उस्तै जम्दै थिए । केही युवाहरू धनुष र वाण बोकेर तारो हान्दै थिए । साना केटाकेटीहरू फुटबलमा झुम्दै । मौका कसरी चुकाउनु ? जंगली लसुन र गोलभेंडाको चटनी । याकको मासु अनि कें अर्थात् भात ।
खुला चौरमा बसेर, फूलेको फापरबारी नियाल्दै, हामीले पनि मज्जा लियौं । यो मौकाले हामीलाई अर्को गाउँ भ्राकामा पनि पच्छयायो ।
न धनी न गरिब । के बच्चा के बूढाबूढी । सबै जातजातिसँगै बसेर पकाउने खाने र रमाइलो गर्ने । यस्तो माहोलले हामीलाई पनि स्थानीयजस्तै बनायो । नाचियो, गाइयो अनिसँगै खाइयो पनि । ‘उहिले उहिले खुब रमाइलो हुन्थ्यो, आफैं गाउने आफैं बजाउने,’ टयांकी मनाङका भुजुङ गुरुङले भने, ‘अहिले त ठूला ठूला स्पिकर घन्कन्छन्, रमाइलो घटिसक्यो ।’ हुन पनि उमेरले पहाड चुमेका बूढाबूढीलाई भने किकी कम रसिलो हुन थालेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । सायद हराउँदै गएको आफ्नोपनले मनाङलाई मात्र हैन पूरै नेपाललाई दुखाएको छ ।
यात्रामा मैले केही यस्ता विदेशी पात्र भेटेँ जो एक्लै नेपाल चहार्दै थिए । एक थिए भर्खरै २० टेकेका स्पेनका ठिटा जेभिएर । मेडिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक पढ्दै गरेका उनी पिसाङको पिकनिकमा गाउँलेसँगै घुलिसकेका थिए । अघिल्लो रात नै पिसाङ आइपुगेका उनी तिलिचो हुँदै थोराङला पास गर्ने योजनामा रहेछन् । उता मेड्रिड सहर गर्मीले काकाकुल भइरहेको बेला उनी भने मनाङमा चिसोको मज्जा लिँदै थिए । भारतको केरला, मुम्बै, गोवा, तामिलनाडुका विभिन्न गाउँ दुई महिना घुमेर स्थलमार्गबाट नेपाल आएका उनको आनीबानी हेर्दा वर्षौंदेखि नेपाल बसिरहेको झैं लाग्यो ।
यस्तै अर्का एक अमेरिकीसँग पिसाङमा कुराकानी हुन पायो । कबिरमान सिंङ हेमसाथ । एन्थ्रोप्लोजीका प्राध्यापक । साधारण भएर हिंड्न रुचाउने उनी नेपाली थोरै बोल्थे अनि धेरै बुझ्थे । नाम अलि अनौठो लागेर मैले थप जान्न खोजेँ । उनकी आमा भारतीय मूलकी रहिछन् ।
बाबा अमेरिकन । नाम दुवैको फयुजन । गज्जबको कुरा उनले बिहे भने काठमाडौंकी नेवार केटीसँग गरेछन् । उनका ससुराचाहिं नेपाली नै भए पनि सासू भने इरानी मूलकी रहिछन् । यसैले भनिएको होला, देशहरूबीचमा लगाइने राजनीतिक पर्खाललाई बलिया सम्बन्धका बलले तहसनहस बनाइदिन सक्छ ।
यात्रामा यस्ता धेरै पात्र भेटिन्छन् जसले हामीमा यात्रा गरिरहने ऊर्जा थप्छ । भ्राकाको बाटोमा मैले भारतीय मूलकी एक युवती भेटेँ । अग्ली र पातली । जंगलको बीचैबीच उकालो चढ्नुपर्ने लगभग चार हजार मिटर उचाइमा रहेको मिलारेपा गुफा जाने बाटो खोज्दै थिइन् । मलाई गुफा रहेको पहाडको उचाइभन्दा उनको साहसको उचाइ ठूलो लाग्यो । बाटो बिराएकी उनलाई मैले गुफा जाने बाटो देखाइदिएँ । ‘थेङ्क्यु सो मच’ यति भनेर उनले दुवै हातमा समातेका लौरीहरू सरासर अघि बढाइन् । लाग्यो यिनीहरू थोरै केही पात्रहरू हुन् जो आफ्नै निम्ति बाँच्दै छन् । अनि यस्तो खुला विश्वविद्यालयमा पढ्दै छन् जहाँ पाठयक्रम आफैं बनाउँछन् । परीक्षा आफंै दिन्छन् । कहिल्यै फेल हुँदैनन् । कि जित्छन् कि सिक्छन् ।
अध्ययनका सिलसिलामा पानीको मुहानमा पुग्नु । त्यसको भौगोलिक नाप लिनु पनि जिम्मेवारी थियो । यसका लागि हामी ३५ सय मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेका पिसाङको सांके खोला, भ्राकाको घट्ट खोला अनि ट्याङी मनाङको स्याङ्तान खोलाको मुहानमा पुग्यौं । यी तीनै मुहान पुग्न डरलाग्दो भीर छिचोलेर जानुपथ्र्यो ।
घट्ट खोला मुहान छिचोल्ने भीर । चार हातखुट्टा टेकेर आफैं बाटो बनाउँदै उक्लनुपर्‍यो । तब मन खंग्रङ्ग भयो जब बीचैमा न चल्ने ठाउँ पाइयो न राम्ररी अडेसाउने ढुंगो । हातगोडा फतक्कै गले । भीर पनि जहाँ टेक्यो त्यहाँ फुसफुस गेगर निस्कने । तल हेर्‍यो दाँत उदयाएर बसेका चट्टान अनि उर्लेको भेल । भर्खरै गएको पहिरोले पानीको पायप मात्र छाडेर हिंड्ने बाटो बोकेर कुदेछ । पहिरोले ताछिएको भीरमा पाइला चाल्दा दुई पटकसम्म खुट्टा लस्किएपछि एकै छिन त यता न उताको भइयो । मैले ६ सय वर्ष पुरानो भ्राका गुम्बाको बुद्धलाई सम्झेँ । बाटोमा ढुंगा चढाएका छोर्तेनहरूलाई सम्झें । अनि विभिन्न रङका तोरन जस्ता तर्नासँगै सल्लाको डन्डीमा उभिएर फर्फराउँने थोच्र्योलाई सम्झेँ । यससँगै मैले परिवार अनि आफन्तहरूलाई पनि सम्झेँ । जिन्दगी जब धारमा हुन्छ, तब हामीसँग सम्झनाका निम्ति अनेकौं यादहरू फनफनी आँखाअघि नाच्दा रहेछन् । अब भने जीवनलाई आफ्नै पाउमा नबिसाई सुखै भएन । मैले बिस्तारै फेरि पहिलो पाइला चालें, लगत्तै दोस्रो तेस्रो गर्दै झन्डै भीर काटियो । त्यसपछिका साना ठूला भीरमा डरलाई पैतालामुनि बिसाएर हिंडियो । एक दुई ठाउँमा चिप्लियो, पछारियो तर ज्यान सम्हालियो । जाबो एक छिनको, एक दिनको यात्रामा त पाइलामा जिन्दगी बोकेर हिंड्नुपर्छ । नार, फुलगायत मनाङमा यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ हरेक दिन पाइलामा जिन्दगी बोकेर गोठालाहरू भेडा र चौरीका पछि कुद्छन् । यसरी आफूले पहिलो पाइला चालेर हजारौं पदयात्रीहरूका लागि यात्राको चिह्न छाडिदिने सबैलाई नमन गर्न मन लाग्यो ।
जाँदा खोला, आउँदा पुल
दुई सातापछि । मनाङमा स्थलगत अनुसन्धानको काम सकियो । मनाङ गाउँबाट सदरमुकाम चामे फर्कने तरखर थियो । लटरम्मै फूलेको फापरबारी । उर्लेका झरनाले सिँगारेका हरिया पहाड । सस्तिएको बजार भाउ र स्वादिलो खाना । अनि झरीले बिगारेका बाटोका मीठा चुनौतीहरू । मनसुनमा मनाङका यस्तै सुन्दर तस्बिरहरू मनमा थिए । म गाडी पाइन्छ कि भनेर खोज्न निस्केँ । यात्रु खोज्न निस्केका गाडी चालकसँग भेट भयो । के चाहियो, लागियो गुटुटु । मनमा भने आउँने बेलामा अड्काएको म्यार्दी खोलाले तर्साइरहेको थियो । त्यहाँ पुग्दा भने अचम्मै देखियो । गएको दुई साता मात्र पुगेको थियो, खोलामाथि बेलिब्रिज बनिसकेछ । भलै अरूले यो पुल तर्न वर्षौं कुर्नुपर्‍यो । हामीले भने दुई सातामै विकासले फड्को मारेको अनुभव गरियो । साँच्चै नै यति चाँडो विकास हुन पाए त मनाङसँगै देशले पनि कोल्टो फेथ्र्यो कि ?
असोज १३ २०७५ मा कान्तिपुर कोशेलीमा प्रकाशित ।
भवसागर घिमिरे म छक्क परेँ जुम्ला बसपार्कमा गाडीको भिड देखेर । सुर्खेत दैलेख र कालिकोट हुँदै जुम्ला भित्रिएका ट्याक्टर जीप र बसले पुरै...
काठमाडौँ — कसोकसो कछुवाकै गति भए पनि झन्डै ९ घन्टाको यात्रापछि चामे पुगियो । मनसुनमा मन्द निदाएको गाउँ । सिमसिम पानी । कालो दाल, काउली र आ...
प्रसंग यहाँबाट सुरु हुन्छ । कास्की जिल्लाको घाचोक गाविस । गत असारको महिना । कच्ची सडक । म पोखरा फर्कनको लागि मामा घरको आँगन छेउमै बस कुर्...
मंगलवार, 14 जूलाई 2009 11:40 नागरिक 2889 भवसागर घिमिरे, काठमाडौं असार ३० - एसएलसीमा विशिष्ट श्रेणी ल्याएकी गर...
Blog Archive May 2019 (1) April 2019 (1) January 2019 (1) September 2018 (1) August 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)
अ मा न वी य दृश्य : डोजरले मान्छेलाई पेलियो